www.camaloow.com - News: Taliyaha Ciidamada Nabadsugida NISA C/llaahi Sanbaloolshe oo cadeeyay In Awood ay kunabadeyn doonaan Muqdisho+Video+Sawirro...............................
December 10 2018 05:47:52
Taliyaha Ciidamada Nabadsugida NISA C/llaahi Sanbaloolshe oo cadeeyay In Awood ay kunabadeyn doonaan Muqdisho+Video+Sawirro...............................
<?php </a> Taliyaha NISA oo cadeeyay In Awood ay kunabadeyn doonaan Muqdisho+Video+Sawirro
Waxaa Xalay magaalada Muqdisho kulan Xasaasi ah oo arimo badan looga hadlay ku yeeshay Wasiirka Amniga Gudaha Xukuumada Soomaalia, Taliyeyaasha Ciidamada Booliska, Nabad sugida, iyo Milateriga, waxaana kulankan intii uu socday looga hadlay xasilinta amniga Muqdisho.
Kulankan Madaxtooada Soomaalia ku yeesheen Wasiirka Amniga iyo Taliyaasha kala duwan ee ciidanka dowlada ayaa si weyn loogu faaqiday howlgalka xasilinta Muqdisho ee wadaan ciidamada isku dhafka ah, waxaana gabo gabadii kulanka laga soo saaray awaamiir cusub.
Wasiirka Amniga gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abukar Islow Ducaale ayaa tilmaamay in qorsha xasilinta Muqdisho uu yahay go’aan ka so baxay Golaha fulinta Jamhuriyadda Soomaaliya, loogana golleeyhahay in Muqdisho noqoto magaalo Nabad ah.
Waxa uu Taliyaha NISA sheegay in dagaal maanta ka dhacay Degmada Kaaraan uusan aheyn mid u dhaxeeyay Ciidamada xasilinta iyo ciidan kale oo dowlada katirsan, waxa uuna tilmaamay dagaalkaasi in uu u dhaxeeyay ciidanka Xasilinta iyo Burcad dooneysay in ay boobto raashin gar gaar.
Kulankan Muqdisho ku yeesheen Taliyaasha Ciidanka dowlada ayaa la isku gartay in magaalada Muqdisho aan lagu arkin Karin ciidan hubeesan oo qorya wata oon ka aheyn ciidanka xasilinta , waxaana lagu amray ciidamada ilaaliya masuuliyiinta in ay diiwaan galiyaan soona qaataan dares loogu tala gakay.
Halkan hoose ka Akhriso Amarada ay soo saraeen Taliyayaasha ciidanka Dowlada
· xassan on June 11 2017 · 0 Comments · 104256 Reads ·
Render time: 0.02 seconds 28,902,475 unique visits